पुनर्लिखित चकलेट- विचार - कान्तिपुर समाचार
प्रबुद्ध पाठकका मनमा प्रश्न छ— के ती नेपथ्यका सर्जकहरू व्यापारी हुन् ? प्रगतिशील पनि तिनै र प्रतिक्रियावादी पनि तिनै ? त्यसो भए के राजनीतिक समीकरण भत्काउने र बनाउने, सुल्झाउने र जटिल बनाइदिने सबै तिनै हुन्, जसले नेपाली राजनीतिमा ‘चकलेट’ को पुनर्लेखन गरिरहन्छन् ? प्रकाशित : फाल्गुन १६, २०७६ ०७:५६
फाल्गुन १६, २०७६ एजेन्सी
जेनेभा — बिहीबार विभिन्न ७ देशमा कोरोना भाइरस(कोभिड–१९)को पहिलो संक्रमण देखिएपछि विश्व स्वास्थ्य संगठन(डब्लुएचओ)ले सबै सदस्य राष्ट्रहरुलाई तयारीका लागि चेतावनी दिएको छ ।
डिसेम्बरमा भाइरस देखिएयता चीनबाहिर ५ हजारभन्दा बढीमा संक्रमण पाइएको छ भने ७० जनाको मृत्यु भइसकेको छ । चीनमा मात्रै २ हजार ७ सय ८८ जनाको मृत्यु हुनुका साथै ७८ हजार ८ सय ३२ संक्रमित भएका छन् । कोभिड–१९ ले चीनपछि सबैभन्दा धेरै इरानमा २६ जनाको मृत्यु भएको छ भने २ सय ४५ जना संक्रमित पुष्टि भएका छन् । संक्रमितको संख्यामा वृद्धि भएपछि तेहरानले सबै सार्वजनिक क्षेत्र बन्द गरेको छ । चीनबाट आउने पर्यटकलाई निषेध गर्ने निर्णय पनि उसले गरेको छ। संक्रमित संख्याका हिसाबले चीनपछि सबैभन्दा धेरै दक्षिण कोरियामा दुई हजार २२ छ। बिहीबारसम्म दक्षिण कोरियामा १३ जनाको मृत्यु भएको छ।
कोभिड–१९ संक्रमण फैलिएको इटालीको लम्बर्डी क्षेत्रका प्रमुख एट्टिलियो फोन्टाना स्वयं क्वारेन्टाइनमा गएका छन् । एक कर्मचारीमा भाइरस पुष्टि भएपछि उनी वारेन्टाइनमा गएका हुन् । ‘अहिले मलाई कुनै संक्रमण नदेखिए पनि दुई साता आफैंलाई आइसोलनमा राख्न प्रयासरत छु,’ उनले फेसबुकमा लेखेका छन् । लम्बार्डी क्षेत्रमा मात्र ३ सयभन्दा बढीमा कोभिड–१९ संक्रमण पाइएको छ र १० जनाको मृत्यु भएको छ। समग्र इटालीमा ६ सय ५५ जना संक्रमित भएका छन् र १७ जनाको मृत्यु भएको छ ।
जापानले अप्रिलसम्मका लागि सबै विद्यालयहरु बन्द गर्ने भएको छ। त्यहाँ हालसम्म २०७ जनामा संक्रमण पाइएको छ भने योकोहामा रोकिएको पानीजहाजमा ७ सय ४ जनामा संक्रमित पुष्टि भएका छन् । पानीजहाजका ४ सहित जापानमा ८ जनाको कोभिड–१९ ले मृत्यु भएको छ ।
त्यस्तै कोभिड-१९ कारण हङकङ र फ्रान्समा २-२, ताइवान र फिलिपिन्समा १-१ जनाको मृत्यु भएको छ।
प्रकाशित : फाल्गुन १६, २०७६ ०७:५१